Hiob asi ne bo sɛ ɔbɛkɔ so abɔ bra a edi mu (1-23)
“Mɛkɔ so ama m’abrabɔ adi mu” (5)
Abɔnefo nni anidaso (8)
“Adɛn nti na aba biara nni mo nsɛm mu yi?” (12)
Biribiara renka mma abɔnefo (13-23)
27 Ɛnna Hiob toaa n’asɛm* no so sɛ: 2 “Sɛ́ Onyankopɔn a ɔne me anni no yiye no te ase yi,+Na ade nyinaa so Tumfo a ɔne me* adi no nwenweenwene no te ase yi,+ 3 Bere a m’ahome da so wɔ me mu,Na honhom a efi Onyankopɔn hɔ wɔ me hwenem yi,+ 4 Meremfa m’ano nka amumɔyɛsɛm,Na meremfa me tɛkrɛma nka nnaadaasɛm! 5 Ɛmpare me sɛ mebu mo bem! Mɛkɔ so ama m’abrabɔ adi mu akosi sɛ mewu!+ 6 Mekura me trenee mu denneennen, na merennyaa mu da;+Me koma remmu me fɔ* me nkwa nna nyinaa.* 7 Ma me tamfo nyɛ sɛ ɔbɔnefo,Na ma wɔn a wɔsɔre tia me no nyɛ sɛ amumɔyɛfo. 8 Sɛ Onyankopɔn sɛe ɔbɔnefo* a, anidaso bɛn na ɔwɔ,+Sɛ ogye ne nkwa* fi ne nsam a, anidaso bɛn na ɛwɔ hɔ ma no? 9 Sɛ amanehunu ba no so a,+Onyankopɔn betie ne sufrɛ anaa? 10 Ade nyinaa so Tumfo no nti, n’ani begye anaa? Ɔbɛfrɛ Onyankopɔn daa anaa? 11 Mɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn tumi* ho ade;Meremfa ade nyinaa so Tumfo no ho biribiara nsie. 12 Hwɛ! Sɛ mo nyinaa moanya anisoadehu a,Adɛn nti na aba biara nni mo nsɛm mu yi? 13 Eyi na ɔbɔnefo benya afi Onyankopɔn hɔ,+Na eyi ne agyapade a atirimɔdenfo benya afi ade nyinaa so Tumfo no hɔ. 14 Sɛ ne mma dɔɔso mpo a, sekan na ebekunkum wɔn,+Na n’asefo rennya aduan a ɛbɛso wɔn. 15 Ne ho nnipa a ɛbɛka no, owuyare na ebekunkum wɔn,Na wɔn akunafo rensu wɔn. 16 Sɛ ɔboaboa dwetɛ ano sɛ mfuturu,Na ɔboaboa ntaade pa pii ano sɛ dɔte de sie mpo a, 17 Boa de, ɔbɛboaboa ano,Nanso ɔtreneeni na ɔbɛhyɛ,+Na nnipa a wɔn ho nni asɛm bɛkyɛ ne dwetɛ no afa. 18 Ne fi a wasi nni ahoɔden, na ɛyɛ mmerɛw te sɛ abubummabaa dan;Ɛte sɛ apata+ a ɔwɛmfo abɔ. 19 Sɛ ɔrekɔda a ɔyɛ osikani, nanso ɔremmoaboa hwee ano;Obebue n’ani no, na hwee nni hɔ. 20 Nneɛma a ɛyɛ hu bɛfa no sɛ nsu;Ahum behwim no akɔ anadwo.+ 21 Apuei mframa bɛsoa no akɔ, na obefi hɔ;Ɛbɛpra no afi baabi a ɔte.+ 22 Ɔbɛyɛ sɛ ɔde ahometew reguan afi n’ahoɔden ano,+Nanso ebebu aba no so, na ɛrenhu no mmɔbɔ;+ 23 Ɛbɛbɔ ne nsam agu no so,Na ebefi baabi a ɛwɔ no abɔ hwirema+ agu no so.*
^ Anaa “rentwa me adapaa.”
^ Anaa “me nna biara ho.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Menam Onyankopɔn nsa so bɛkyerɛkyerɛ mo.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔbɔ wɔn nsam gu no so, na wofi baabi a wɔwɔ no bɔ hwirema gu no so.”